Shiinaha Mashiinka Kala-jajabinta iyo Qalajinta (ee Filimada Afka ah) Soo-saar iyo Warshad | Iswaafajiyay
Qalabka Daawooyinka ee Filimada Afka ah
Qalabaynta Qalabka Mashiinka iyo Qalajinta (Filimyada Afka ah)
Mashiinkaan si toos ah otomaatiga u jajabaya iyo qalajinta waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu dhammeeyo geeddi socodka qoyaanka hagaajinta, jeexitaanka iyo dib u wareejinta filimka afka iyo PET duubka filimka isku dhafan, oo awood u siinaya in duubabka filimku ay la jaan qaadaan tirada saxda ah iyo astaamaha qalabka looga baahan yahay geeddi-socodka hoose.
Xawaaraha wax soo saarka Jaangooyada 0.02m-10m / min
Kala-bixinta ballaca filimka 110-190 mm (Ugu badnaan 380mm)
Balaca shabakada filimka ≤380 mm
Awoodda mootada 0.8KW / 220V
Koronto Marxaladda keli ah 220V 50 / 60HZ 2KW
Waxtarka miiraha hawada 99.95%
Mugga socodka bamka hawada ≥0.40m3 / daqiiqo
Qalabka wax lagu rakibo Kala jeex jeexjeexan dhumucda filimka isku dhafan 0.12mm
Qiyaasta mashiinka (L × W × H) 1930 × 1400 × 1950mm
Qiyaasta baako (L × W × H) 2200 × 1600 × 2250mm
Miisaanka mashiinka 1200Kg
ODF, magaca oo buuxa waa xuub kala daadanaya afka. Filimka noocan ahi waa mid tayadiisu yar tahay, fudud tahay in la qaado, isla markaana si dhakhso leh loo kala dareemo iyada oo aan lala dhigin dareeraha, isla markaana si hufan loo nuugo. Kani waa nooc nooc cusub ah, oo inta badan loo isticmaalo qaybaha farmashiyaha, cuntada, kiimikooyinka maalinlaha ah, waxyaabaha xayawaanka lagu gado, iwm, aadna ay u ammaanaan macaamiisha.
Habka wax soo saarka filimka ODF, filimka ka dib marka la dhammeeyo, waxaa saameeya deegaanka wax soo saarka ama arrimo kale oo aan la xakamayn karin. Waxaan u baahanahay inaan hagaajino oo aan jarno filimka la soo saaray, badanaa marka la eego jarista cabbirka, hagaajinta qoyaanka, saliidaha iyo xaaladaha kale, si filimku u gaaro heerka baakadaha, oo aan u sameynno wax ka beddel tallaabada xigta ee baakadka. Qalabkani waa nidaam lama-huraan u ah geeddi-soo-saarka filimka, hubinta isticmaalka ugu badan ee filimka.
Kadib sanado badan oo R & D iyo wax soo saar, qalabkeenu wuxuu si isdaba joog ah u hagaajiyay dhibaatooyinka tijaabooyinka, xalinta dhibaatooyinka qalabka, hagaajinta dhibaatooyinka naqshada qalabka, wuxuuna siiyay dammaanad farsamo oo xoogan adeeg fiican macaamiisha.
Qalabkeena waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro noocyada kala duwan ee alaabada filimka ah.
Badanaa, macaamiisha waxay iibsadaan qalab si ay u soo saaraan daawooyin u baahan nuugid deg deg ah si loo daweeyo cuduro kala duwan. Daawooyinka noocan ah waxay u baahan yihiin nuugid deg deg ah si loo gaaro xallinta dhibaatada degdegga ah loona yareeyo astaamaha bukaanka.
Isla mar ahaantaana, macaamiisheenna waxaa loo isticmaalaa inay soo saaraan wax soo saar filim af ah oo cusub. Xuubka ka dib marka lagu qaso candhuufta, walxaha cusub ee xuubka waxaa si dhakhso leh u nuugi kara jidhka bini'aadamka si loo gaadho ujeedada ah in afka la cusboonaysiiyo.
Hadda oo ay soo badanayaan wax soo saarka ODF ee suuqa yaalla, baahida loo qabo alaabooyinka ayaa sii kordheysa maalinba maalinta ka dambeysa, isla markaana marba marka ka dambeysa ay sii kordhayaan faa iidada suuqa. Qalab aad u fiican ayaa hubin kara wax soo saar hufan. Inkasta oo kooxda Aligned ay ku siinayaan qalab tayo sare leh, waxay sidoo kale ku siinayaan adeeg hufan iibka kadib, markaa uma baahnid inaad ka walwasho mustaqbalka.
Rumayso in la waafajiyo, rumayso awoodda iimaanka!
Hore: Mashiinka Sameynta Filimka OZM
Xiga: Mashiinka Mashiinka Xidhmada ee ODF Strip
Qalabka Qallajinta Cbd